Ball Amaphayiphu, threaded nokufaka, Mini ibhola valve - Kaixuan
Sigxila ekuhlanganisweni kwamapayipi wensimbi engagqwali kanye nama-valve iminyaka engaphezu kwengu-18.
Siyiqembu eliphethwe ngumndeni, uMnu Yan abafowethu basungule iKX Co (Anping County KaiXuan imikhiqizo yensimbi engagqwali Co., Ltd.) futhi bakha isitshalo seCasting & CNC ngo-2002. Izinhloko zesizukulwane esincane sikaMnu Yan abafowethu iKX Co. ' Ukuthuthukiswa kwamabhizinisi emhlabeni jikelele, amasu, nokumaketha.
Izinsiza kusebenza zokuhlola
Isebenza ngabasebenzi bokusika nokugaya abangochwepheshe, imishini yokuhlola ingcindezi inolawulo oluhle phezu kwengcindezi yamanzi nokutholwa kwengcindezi yomoya ngesikhathi sokuhlolwa komkhiqizo.
Ukusekelwa Okuqinile Kokukhiqiza
Umthamo wenyanga wokukhiqiza ungamathani ayi-100. Isikhunta esizenzekelayo esizenzekelayo sinokukhiqizwa kwansuku zonke kwezingxenye ze-wax ezingama-3,000, okuphindwe kathathu kunesikhunta esenziwe ngesandla.
Isetshenziswa njengezixhumi zamapayipi ezokuhambisa amanzi, uwoyela, igesi, kanye nazo zonke izinhlobo zokugqwala ezilungele insimbi engagqwali.
Isicelo: Amanzi, iPetroleum, amakhemikhali, umkhakha wokukhanya, imishini yamandla aphezulu, ezemithi, njll.
I-KX inikeza amakhasimende emhlabeni wonke ngokunemba kokutshalwa kwezimali ngokunemba kuzidingo zawo.
buka wonke amacala